Nhau - Rudzi Nyowani rweSilicone Rakaberekwazve Vacheche
Kunyangwe iwe uchidanana nevacheche vakazvarwa patsva kana iwe ukasarudza kurega vamwe vatore chikamu mukutora aya anonyanya kuunganidzwa zvidhori uye iwe unongofarira kudzidza zvakawanda nezvavo, iyi posvo ichaita seyakaisirwa sumo. Vanozvarwa patsva imhando yehunyanzvi iyo yakangokura mukuzivikanwa kubva pakatanga kuzvarwa patsva maartist akatanga kugadzira madhiragi aya kune veruzhinji mukutanga kwema90's Saka chii chinozvarwa patsva vacheche? Iwo Silicone vacheche madhiraini kana vinyl zvidhori zvakagadzirirwa kunyatso kuratidza vacheche uye vadiki vadiki.
Nhoroondo ipfupi yevana vanozvarwa patsva
Berusaa kambani yeSpain ndiyo yakatanga kutanga kugadzira vacheche vakazvarwa patsva muma1980. Vakagadzira zvidhori zvine toni dzeganda zvakaita seupenyu uye vakawedzera tsinga diki dzebhuruu kuti dzive dzakafanana nehupenyu muchitarisiko. Kubva pamavambo anozvininipisa aya, vacheche vanozvarwa patsva vakapinda muvinyl molds uye silicone yekuveza iyo ine huremu uye kunzwa kwechecheche achangozvarwa, uye zvimwe zvinhu zvakaita se mohair akaisirwa bvudzi, eyelashes, akanaka magirazi maziso, uye kunyange maficha akadai seanogadzira kufema uye anonzwika kurova kwemoyo. Dzimwe fungidziro dzinoisa huwandu hwevacheche vanozvarwa patsva makumi maviri ezviuru pasirese, uye aya madhongi ave kugadzirwa nevanyori vanovakira pasirese, uye mumwe nemumwe akazvarwa patsva muimbi ane maitiro ake.
Ruzhinji rwevanozvarwa patsva vana zvidhori zvakagadzirwa nemaoko, asi iwe unogona kutenga DIY kits uye preade molds iwe yaunogona kuzvivaka iwe pachako, uye-ehe-iwe unogona kutenga vakazvarwa patsva madhori ayo ari 100% apera uye akagadzirira kutorwa.
Kune vana vemuAmerica vanozvarwa patsva vacheche uye veCaucasus vanozvarwa patsva, vacheche vanozvarwa patsva nemadhora emarudzi ese uye madzinza. Imwe yeaya madhoiri akafanana nevamwe vavo vapenyu zvekuti kune dzimwe nyaya (ngano pamwe) dzevanofamba vanofamba vachipinda mumota dzakakiyiwa kuti vachengete madhiraoni eesilon echokwadi, vaSamariya vakanaka vakavhiringidzika uye vakakatyamadzwa uye pamwe vakakatyamadzwa kuona kuti mwana haasi mupenyu, asi akafanana neupenyu.
Vanozvarwa patsva vanogona kuumbwa kuti vafanane nevacheche chaivo, uye vamwe vanosarudza kutumira mifananidzo yevana vakarasika kana vacheche vane mukurumbira kuti vashandise segwara revanozvarwa patsva. Vanozvarwa patsva vanogona kuve sosi yemufaro kune vakaroora vasina vana kana vakadzi vasingakwanise kubata pamuviri. Vakakomba vateresi zvakare vanoda kubhadhara iwo mutengo chaiwo weakasarudzika akazvarwa patsva madhora. Chidhori chakazvarwa patsva chaPrince George chakatengeswa anopfuura mazana gumi nematanhatu emapaunzi.
Kune zvakare kune mashoma niche akaberekwazve misika, anosanganisira emashiripiti akazvarwa patsva zvidhori uye mhuka dzinozvarwazve zvidhori, kunyangwe iyo IRDA - International Reborn Doll Artists - mutumbi unoongorora iyo yakazvarwa patsva dhizaini inogadzira indasitiri uye zviyero - inoramba ichitarisa padyo pane chero chitsva chinodikanwa kana zvisikwa. Kugadzira vacheche vakazvarwa patsva ibasa rekushandira uye iyo yakasarudzika modhi yedhoni yakazvarwa patsva inosanganisira kutanga nevinyl dhori muforoma, uyezve nekuwedzera akati wandei matara ependi uye kuumba zvimwe zvinhu.
Kunyangwe iwe uchibhadhara muoni akaberekwazve kuti agadzire chidhori chako, kana kutenga kwako kitsi ichangozvarwa inotengeswa mune yakasarudzika chitoro iyo inokutendera iwe kuti ugadzire chako wega chidhiraina, maitiro e "kubara" akaberekwazve anozivikanwa sekumukazve. Musiki ndiye ane basa nekuonekwa kwechidhori, uye vinyl ndicho chinhu chinonyanya kufarirwa chinoshandiswa mukugadzira zvidhori zvakare.
Nekudaro, munguva pfupi yapfuura, silicon yakazvarwa patsva madhora ave akakurumbira zvakanyanya. Zvinogona kunge zviri nekuti zvakapfava uye zvinonamira. Iwo madhiri ekuberekwazve anotevedzera kupfava kwemwana chaiye. Maoko, maoko, minwe, uye makumbo avo ose akakotama senge makumbo chaiwo. Kunze kwaizvozvo, mabhureki zvakare anopihwa pendi-yakazorwa ruoko, maziso ane maronda marefu, uye musoro uzere nevhudzi rakanaka.
Chimwe chezvinhu zvega zvidhori zvakazvarwa patsva zvinogona kunetsa vateresi ingozi yekuti pendi yedhori inogona kubuda kana isiri yemhando pendi kana vinyl. Ndosaka zvakakosha kuti iwe uodha madhodhi ako akazvarwa patsva kubva kune imwe nzvimbo yakavimbika. Zvigadzirwa zvinoshandiswa kugadzira zvidhori zvesilicon zvine hunyanzvi uye hazvigone kutengwa kubva kune chero dura rehardware. Girazi regirazi maziso anoshandiswa mune mazhinji madhizaoni esilicon, uye madhiragi akazadzwawo nemapellets anovaremera kunge mwana achangozvarwa.
Uye sezvatakambotaura, iwe unogona zvakare kugadzirisa rako rekuzvarwa patsva mwana mudhori. Vamwe vateresi nevatengi vanowedzera pazvinhu zvinoita kuti zvidhori zvavo zvioneke senge zveupenyu, semuenzaniso magineti anogona kunamatira pamuromo wemwana akazvarwa patsva kuti ubvumidze kubata pacifier. Kana chigadzirwa chemagetsi chinogona kuiswa kudzora kusimuka uye kudonha kwechipfuva chavo, kutevedzera mucheche chaiye nekufema kwawo.